Deegaan | Radio Himilo | Page 3
Home / Deegaan (page 3)
Pakistan: Marka aad guri dhisanayso waa inaad beertaa labo geed!
Mahad Mohamed May 25, 2019
Himilo FM –Si looga shaqeeyo billicda deegaanka, maxkamadda sarre ee Lahore ayaa ku dhawaaqday inay waajib tahay in qofka uu ugu yaraan talaalo labo geed marka uu dhisanayo guri. Isaga oo akhrinayay warqad furan oo la xiriirta wasakhda deegaanka ayaa ...
Indonesia oo ka guureysa caasimadeeda Jakarta
Mahad Mohamed April 29, 2019
Himilo FM –Madaxweynaha Indonesia ayaa go’aansaday in caasimadda dalkaasi laga wareejiyo magaalada Jakarta iyadoo laga dhigayo magaale kale oo isla jasiiradda ku taalla. Magaalada rasmiga ah ee loo caleema saarayo caasimadda ayaan wali laga qaadan go’aan hase ahaatee waxay qaadan ...
Ahmed Haadi March 22, 2019
Himilo FM – 22 bisha March sanad kasta waxaa dunida laga xusaa Maalinta Caalamiga ah ee Biyaha. Ujeeddadu waa in la xaddidaa mushkiladaha biyaha ku foolan. Maanta, 1.8 bilyan oo dad ah ayaa adeegsada ama isticmaala biyo aan sugneyn – ...
Sahan: Magaalooyinka ugu qaalisan iyo kuwa ugu jaban xagga nolosha
Mahad Mohamed March 19, 2019
Himilo FM –Magaalooyinka Paris, Hong Kong iyo Singapore ayaa safka hore ka soo galay liiska magaalooyinka ugu qaalisan caalamka. Waa markii ugu horreysay oo ay seddex magaalo qeybsadaan kaalinta ugu horreysa ee sahanka sanadlaha ah ee uu sameeyo Economist muddo ...
Daraasad cusub: Meeraha Mercury ayaa u dhaw dhulka!
Mahad Mohamed March 17, 2019
Himilo FM –Meeraha Venus ayaa in muddo ah lagu tirinayay inuu yahay kan ugu dhaw dhulka laakiin waxa uu tilmaamtan ku weyn karaa natiijada baaritaan cusub oo dhaliyay dood badan. Baarayaal katirsan jaamacadda Alabama ayaa sheegay in meeraha Mercury uu ...